पाठ्यपुस्तकमा चुच्चेनक्सा क्यान्सिलपछि सदर !
देशभक्ति राजनीति । देश बिग्रेकै देशभक्तिमा एकमत, एक स्वर र एक भाव नहुनाले हो । स्वार्थका लागि देशभक्ति गर्ने र स्वार्थ पूराभएपछि आफ्नैमात्र चिन्तन गर्ने नेताहरूका कारण देश दिनदिनै कमजोर र विदेशीले हेप्ने अवस्थामा पुगेको छ । जेठोमध्येको नेपाल, कहिल्यै कसैको उपनिवेश नबनेको नेपाल, स्वाधीन नेपाल आज पराधीनताको चङ्गूलमा फस्नपुगेको छ ।
चुच्चे नक्सा अध्यावधिक गरियो । संसदबाटै पास गरेर संविधानमा सामेल गरियो । यतिभइसकेपछि चुच्चे नक्साअनुसारको भूभाग नेपालले उपभोग गर्ने कसरी भनेर सोच्नुपर्ने थियो । नक्सामाथि सत्ताधारीले राजनीति गरे, सत्ताविरोधीले राजनीति गरे, चुच्चे नक्साअनुसारका कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक भारतले कब्जा गरेको छ, भारतीय सुरक्षाकर्मीको तैनाथीमा छ, भारतीय शासन छ त्यहाँ ।
भूभाग नेपालको शासन भारतको ? यस्तो स्थिति छ, राजनीतिक नेतृत्वतह यसबारे पटक्कै मुख खोल्दैनन् । सत्ताधारी पनि मौनता धारण गरेर बसेको छ ।
संसद बिघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेपछि सत्ता राजनीति सडक र अदालत पुगेको हो । सरकार कति बाठो छ भने चुच्चे नक्सा संसदबाट पारित हुनासाथ पाठ्यपुस्तकमा त्यो नक्सा राखेर छाप्ने काम गरियो । भित्रभित्रै भारत यसरी रिसाइरहेको थियो कि सरकारले ती सबै पाठ्यपुस्तक स्कूल विद्यार्थीका हात हातमा जानबाटै रोक्यो । ती सबै पाठ्यपुस्तक गोदाममा थन्काउन लगायो ।
घोषणा गरेको चुनाव भए पनि नभए पनि आवधिक चुनाव डेढवर्षमा गर्नैपर्छ । चुनावलाई दृष्टिगत गरेर आमनागरिकको देशभक्तिको भावनासँग खेलेर भोट लिनका लागि सरकारले चुच्चे नक्सा अंकित पाठ्यपुस्तक स्वीकृत गरेको छ ।
पहिले क्यान्सिल किन गरियो ?अहिले सदर गर्नुपर्ने कारण के हो ? सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ । जनता आफ्नो अध्यावधिक भएको नक्सामा गौरव गर्न चाहन्छन् र नक्साअनुसारका भूभागमा नेपालकै शासन, हकभोग कायम भएको हेर्न चाहन्छन् । जनताको भावना र देशको नक्सामा राजनीति किन भइरहेको छ ?